Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Caawa Qoreen Wargeysyada Yurub | Laacib.net
July 17, 2019 Balaleti 0
Habeen wanaagsan akhristayaasheena sharafta leh meel walba oo aad joogtaan, sida aan inooga barateen waxaan caawa oo Arbaco ah idiin soo gudbineynaa wararkii ugu danbeeyay ee ay qoreen wargeysyada iyo warbaahinta qaarada Yurub ee ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Arsenal ayaa heshiis ka gaartay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Real Madrid Dani Ceballos waxay ku qaadanayaan heshiis amaah hal xilli ciyaareed ah laakiin kuma jirto heshiiska inay si joogta ah u iibsan karaan ka dib amaahda. (Marca)
Wakiilka Paul Pogba, Mino Raiola ayaa shidaal ku sii shubay wararka xanta ah ee ciyaaryahanka la xiriirinaya Real Madrid isagoo saxaafada u sheegay in sheekadiisa aysan weli soo dhamaanin. (Marca)
Barcelona ayaa ku dhow saxixia Tailson oo ay kala soo wareegeyso kooxda reer Brazil ee Santos. Waxa uu da’ yarkaan ku imaan doonaa si bilaash ah, waxaana uu toos uga mid noqon doonaa kooxda Barcelona B. (Marca)
Mesut Ozil ayaa dooneynin inuu ka tago Arsenal xagaagan inkastoo uusan heysan balanqaad ah inuu boos joogta ah ka helayo tababare Uai Emery. Fenerbahce ayaa xiiseyneysay 30 jirkaan laakiin isaga ayaan dooneynin inuu u wareego Turkiga. (Sport Bild)
Borussia Dortmund ayaa xiriir kala sameysay kooxda RB Leipzig weeraryahan Timo Werner oo ay doonayaan inay keenaan Signal Iduna Park laakiin 23 jirkaan ayaa doonaya inuu u wareego Bayern Munich. (Sport Bild)
Dortmund ayaa weli xiiseyneysa weeraryahan Mario Mandzukic waxaana ay heshiis la gaari kartaa Juventus ka dib markii ay Bayern Munich ka baxday saxiixiisa. (Sport Bild)
Renato Sanches ayaa doonaya inuu si joogta ah uga tago Bayern Munich xagaagan haddii tababare Niko Kovac uusan u balanqaadi karin boos joogta ah. (Sport1)
Barcelona ayaa ku qasban inay ciyaartoy iibiso ka hor inta aysan PSG kala soo wareegin Neymar waxaana ay diyaar u yihiin inay dhageystaan dalabyada u imaanaya Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Malcom, Nelson Semedo iyo Samuel Umtiti.(Marca)
Bayern Munich ayaa heshiis la gaartay xiddiga khadka dhexe ee Espanyol Marc Roca laakiin weli ma aysan bixinin lacagta 35ta milyan ginni ee qandaraaskiisa lagu burburin karo. (Marca)
Malcom ayaa doonaya inuu isaga tago Camp Nou, waxaana wakiilkiisa uu la kulmay madaxda Barcelona si ay u fasaxaan ciyaaryahanka. Arsenal ayaa lala xiriirinayay xiddiga reer Brazil horaantii xagaagan laakiin waa ay ka laabteen xiisahooda haatan. (Mundo Deportivo)
Tottenham iyo Wolves ayaa xiiseynaya weeraryahanka Ateltico Madrid Angel Correa laakiin waxa ay tartan kala kulmayaan kooxaha Talyaaniga ee AC Milan iyo Napoli. (AS)
Barcelona ayaa dib u la soo saxixiay Marc Cucurella oo ay markii hore ka iibiyeen Eibar laakiin ma doonayaan inay sii ceshtaan iyadoo 20 jirkaan ay xiiseynayaan kooxaha Borussia Dortmund iyo AC Milan. (AS)
Everton ayaa tartan kala kulmeysa Borussia Dortmund oo ku aadan saxiixa weeraryahanka Juventus Moise Kean. Kooxda heysata horyaalka Talyaaniga ayaa diyaar u ah inay iibiso weeraryahanka da’da yar balse qandaraaska lagu darro inay dib u soo iibsan karto mustaqbalka. (Gazzetta dello Sport)
Tababare Antonio Conte ayaa ku cadaadinaya Inter inay dhameystirto saxiixa weeraryahanka Manchester United Romelu Lukaku uyadoo kooxda Serie A ka dhisan aysan weli wax dalab ah ka gudbinin xiddiga reer Belgium. (Corriere dello Sport)
Mauro Icardi ayaa diyaar u ah inuu u wareego Napoli, waxaana madaxweynaha kooxda Aurelio De Laurentiis uu si maldahan u sheegay inay u dhaqaaqayaan weeraryahanka isagoo yiri: “Waxaan raadinayaa weeraryahan 30 gool dhalin kara xilli ciyaareedkii” (Corriere dello Sport)
Milan ayaa dalab ka gudbin doona xiddiga Real Madrid Luka Modric haddii xiddiga khadka dhexe suuqa la soo saaro. Xiddiga heysta abaalmarinta Ballon d’Or ayaa qandaraaskisia Real uu dhacayaa xagaaga danbe, waxaana uu xiiseynayay inuu u wareego Inter sannadkii hore. (Sky Italia)